Misy fitsabahana ara-politika ve ao amin’ny tambajotram-pahitalavitra ho an’ny daholobe ao Timor-Leste? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2019 5:39 GMT
Onjam-peo sy Fahitalavitra (RTTL) Timor Atsinanana. Sary: Facebook
Namoaka ny olana momba ny fitsabahana ara-politika ao amin'ny tambajotram-pahitalavitra ho an'ny daholobe ao Timor-Leste ireo mpisolovavan'ny fahalalahana an-gazety taorian'ny fanesorana tampoka ny filohan'ilay tambajotra.
Nesorina tamin'ny toerany tamin'ny 9 Janoary 2019 i Gil Da Costa, filohan'ny komity mpitantana ny Onjam-peo sy Televiziona ( RTTL) ao Timor-Leste taorian'ny fanaraha-maso ny kaonty izay niteraka resabe notontosain'ny governemanta. Nosoloina an'i Francisco da Silva izay nitarika ny fanaraha-maso ny kaonty i Da Costa.
Voalaza fa nahitana ny tsy fahatomombanana nandritra ny fitondran'i Da Costa ny fanaraha-maso ny kaonty. Saingy nanambara i Da Costa fa nesorina izy noho ny antony ara-politika, indrindra ny fandàvany ny hamela ny fitsabahana ara-politika tamin'ny famoaham-baovao tao amin'ny RTTL.
Amin'ny maha-lehiben'ny RTTL ahy dia nanantitrantitra hatrany aho fa tiako mba ho sehatra mahaleotena tsy misy fitsabahana politika izany. Ary niezaka nanao izany aho. Ary betsaka ny fitsabahana ara-politika niseho.
Ny nanendren'ny antoko politika vitsy an'isa an'i Da Costa no antony iray hafa mety ho nahatonga ny fanesorana azy.
Namoaka fanambarana ny Filankevitry ny Mpanao Gazety ao Timor-Leste manameloka ilay antsoiny hoe ny fitsabahana ara-politika voalohany tao amin'ny efitra famoaham-baovaon'ny RTTL hatramin'ny namerenana tamin'ny laoniny ny fahaleovantenan'ny firenena tamin'ny taona 2002. Notsikerain’i Virgílio Guterres izay filohan'ny Filankevitry ny Mpanao Gazety ihany koa ny manampahefanan'ny governemanta tamin'ny fidirana tao amin'ny efitra famoaham-baovaon'ny RTTL sy ny fandrahonana mpanao gazety :
Heloka bevava atao amin'ny asa fanaovan-gazety izany satria nanaisotra ny fahefan'ny lehiben'ny toniandahatsoratra ireo olona ireo ho fampiharana ny tombontsoany ara-politika.
Miahiahy momba ity toe-draharaha ity ny Filankevitry ny Mpanao Gazety, ary hanararaotra ny zava-nitranga mba hampahafantarana amin'ny vahoaka ny ahiahinay, sy amin'ny sampan-draharahan'ny governemanta ihany koa mba hijery akaiky ity toe-draharaha ity.
Nanaiky ny handray ireo fitarainana ary nivoady fa hanao “ezaka fanatsarana” ny filohan'ny RTTL vaovao ho setrin'ny ahiahin'ny Filankevitry ny Mpanao Gazety.
Nanoratra tao amin'ny Facebook mikasika ny olan'ny fitsabahana politika amin'ny fampitam-baovao i António Sampaio, mpanao gazetin'ny masoivohom-baovao iray. Ny Pacific Media Center no nanao fandikan-teny ny lahatsorany izay nosoratana tamin'ny teny Portiogey :
Tsy mikrô fotsiny akory ny mpanao gazety izay mamokatra tsy misy fifanoherana na fandalinana araka ny lazain'ny mpitondra politika.
Mbola zava-dehibe kokoa ny fiantohana ny fahaleovantenan'ny haino aman-jerim-bahoaka. Tsy azo ekena ary tokony hosakanana ny fitsabahana any amin'ny trano famoaham-baovao. Mampihena ny hatsaran'ny fanjakana Timorey Izay rehetra manao izany.
Niroborobo ny sehatra fampahalalam-baovao tao an-toerana tany Timor-Leste indrindra noho ny fanampiana iraisam-pirenena hatramin'ny nahazoany ny fahaleovantenany avy amin'Indonezia tamin'ny taona 2002. Tsy nisy mpanao gazety nogadraina tao Timor-Leste araka ny Reporters Sans Frontières saingy misy ny ahiahy fa manery ny orinasam-pampitam-baovao sasantsasany hampihatra ny fanivanan-tena ny fanerena ara-politika.